Owesilisa, umzimba wakhe, ingqondo, umphefumulo, unekhono ukuxhumana hhayi kuphela nabanye abantu, kodwa futhi nekhono ukuxhumana ulwazi emkhakheni Earth. umzimba wethu e ukuxhumana nge ulwazi emkhakheni olulodwa uyamukela, izinqubo futhi adlulisele ulwazi, okuyinto impahla phansi ukwakha ubuntu nokukhula isintu sisonke. Uyini Omunye ulwazi emkhakheni Zomhlaba?
Ngo isiko amaVeda umqondo enkulungwaneni selivele likhona njengoba Akashic Qopha. Lokhu kwesigubhu yolwazi equkethe inkumbulo zonke umphefumulo womuntu nomzimba: nakho kwakhe, imibono nezenzo; ka wonke incarnations. Akashic Records - lena inqolobane ulwazi mayelana yonke, izenzakalo ezibe, futhi kuzoba khona. idatha Imininingwane zemihla bangase batholakale ukuze isintu, abantu Usufike isiqongo sokuthuthuka ngokomoya futhi alungele ukuxhumana imihlaba ephakeme.
Kodwa umqondo ulwazi Uniform ensimini Zomhlaba iye yaqinisekisa hhayi kuphela emasikweni esoteric, kodwa futhi ezingeni zesayensi. izifundiswa eziningi, osolwazi izifundiswa kanye odokotela ukunikeza imibono futhi bhala zabo amaphepha mayelana nokuba khona kwamakamu amasimu ulwazi, izindwangu emihle kanye namafomu emkhakheni wokuphila. Lezi zinkinga bayavuswa futhi saxoxa ezisezikhundleni eziphakeme kunazo zonke yemfundo futhi izinkundla.
Ngokuvamile, elithi "ulwazi" beza kithi kusukela ezikhathini zasendulo kusukela Latin linencazelo: ulwazi, ukuchaza. It ingabaza ukubaluleka nokubaluleka kwalo mkhuba ezaphakanyiswa zefilosofi zasendulo, futhi impendulo ayitholakali manje. Nokho, kukhona amiswa nomqondo Imininingwane :
1. Konke Animate eziphilayo nezingaphili, livela kanye obusizungezile, uyena obapha futhi wasinikeza umthwalo wemfanelo wokuvikela ulwazi. Zonke izinto ezikhona ngaphakathi ulwazi emkhakheni olulodwa lapho idatha kushintshwa phakathi abathwali.
2. Inkambu Imininingwane Zomhlaba futhi yonke, futhi isakhiwo egqinsiwe isimiso phezulu. Isendlalelo ephakeme, ayanda inhlangano bayo, izacile kuba.
3. Inkambu ulwazi uhlelo eziphilayo sakhiwa imihlaba ezicashile. Le nkambu ingahlaziya futhi silitadishe ulwazi angenayo ukudala, ngenxa amahlule entsha ulwazi ziyaqhubeka ziphenduke.
Lezi nezinye izici kuzoxoxwa ngakho uchungechunge eminye ema-athikili, kodwa umphumela akukatjhuguluki: ulwazi emhlabeni.
Umqondo Akash isibe sibonga eyayithandwa Edgar Cayce, okwase kuphele iminyaka engu-40 wayeyilungu ulwazi isimo emthonjeni ukuthi walibiza: ". Le Akashic Record" Kulezi zemihla, wakwazi ukubona noma yiluphi ulwazi njengoba uhlamvu jikelele kanye siqu, ngokuphathelene etimphilweni tebantfu.
Edgar Keysi wathi lelo lwazi yonke indawo, ngakho-ke kuyadingeka ukuba kukhishwe kuphela faka isimo oyifunayo. Ngo isimo umlingo, lapho uxhumano ulwazi emkhakheni Zomhlaba ibizwa ngokuthi isimo lwaleli yesibili enkulu. Lokhu Arcane kungokwalabo amabutho eyinhloko okwenzeka zonke izinto. "Thatha" ke, okungukuthi, faka ngokugcwele isimo kuphela Izanusi can Arakna, iphuzu assemblage elingaseningizimu Sahasrara. okungukuthi labo amabhizinisi cishe ukuphila emzimbeni womuntu. Nokho, Arcana Omkhulu kunesinye ohlangothini. Zikhona, ngisho trace amanani e bonke abantu. Futhi uma kukhona esincane, bese kuba umsebenzi othile, kungashiwo ukwandisa kakhulu. Lesi sengezo sizokwenza babe ngoshintsho Amazing ikhono lakho ukusebenza idatha efihliwe, okusho ne Akashic Records.
Maduze ukuqalisa Yiqiniso esisha sihlelelwa European School of Magic Ikhono uMoya elalinikezelwe Okwesibili Omkhulu Amandla (2 lwaleli esikhulu). Lena inkambo yesibili ku kohlaka "eSangweni Omkhulu Amandla", okuyinto ayinakho analogue, ungalokothi okunje lwenziwe ngesiRashiya, futhi kuba kunini singenakwenzeka ngokushesha kuphindaphindwe, njengoba kuzoxoxwa amabutho 12 (ngowokuqala 9, no-10, 11 no 12 Arcana), ngoba amandla ngamunye inikeza izinyanga mayelana 2. Ngakho, ngisho noma ukuphindaphindwa okungukuthi, ngeke kwenzeke maduze. Lona eliphakeme ingokomoya Wabasaqalayo ngocansi bili esiyingqayizivele - i engqondo nawokuxoxa master esikhulu Leo Sverdlovsk.
Le projekthi Kuyathakazelisa nokuthi isikole sina okokuqala enjalo umlingo, ezifana European School of Magic Ikhono uMoya, ubani uthola ithuba lokuyofunda magic (kule phrojekthi). Ngokuvamile, beqeqesha abantu bamukele imiphumela izithombe ukuhlolwa, futhi ngaphezulu inqubo yokufunda ngokuqinile ulandele ukulandelana kwezihloko lokuqala eziyisisekelo futhi eminye yinkimbinkimbi.
Kodwa kwanqunywa kule phrojekthi, ukuthi njengoba udaba kuthinta okusezingeni eliphezulu engacabangeki ngisho ke akukho isethi umkhawulo imvamisa Izanusi neohodimosti nodokotela. Ngaphezu kwalokho, zonke izindikimba - ezithakazelisayo kakhulu anhlobonhlobo izithakazelo ingokomoya.
Kakade ophela esithi "Ukuheha isifiso" - amandla 6-th, futhi ngokushesha uzoqala 2 amandla amakhulu Mirror Akash.
Interested? Woza kusayithi lethu, ukubhalisa kwi lelo, thina avulekele zonke inkomfa ngoMgqibelo "Izingxoxo zemilingo" (22-30 isikhathi eMoscow).
Buka Isiqophi ngeprojecti "Amasango Ezinkulu Amandla" - umbhalo ka Magic, sokukhumbula ekuqaleni le phrojekthi.
Afake izicelo zokuqeqeshelwa ukuba lapha